बेडमै गर्भभित्र रहेको बच्चाको चेकजाँच गर्ने मेसिन सहयोग | BeniOnline.com.np जिल्लाका ताजा अनलाइन समाचार
Home स्थानिय समाचार म्याग्दी समाचार बेडमै गर्भभित्र रहेको बच्चाको चेकजाँच गर्ने मेसिन सहयोग
बेडमै गर्भभित्र रहेको बच्चाको चेकजाँच गर्ने मेसिन सहयोग
२०७४, २९ आश्विन आईतवार १०:२६
अमेरिकाबाट एक चिकित्सकले बेनी अस्पतालमा गर्भवति चेकजाँच गर्ने पकेट मेसिन सहयोग गरेका छन् । जिल्लामै अप्रेशनसहितको प्रसुती सेवा, डिजिटल एक्सरे सेवा, जटिल प्रकारका अप्रेशन सेवा उपलब्ध हुन थालेपछि अमेरिकाको भर्जिनियामा रहेका डा. भुषण न्यौपानेले पाठेघरमा रहेको बच्चाको अवस्था, बृद्धिविकास लगाएत गर्भवति महिलालाई सहजसेवा दिन मेसिन सहयोग गरेका हुन् ।
काठमाण्डौ निवासी न्यौपानेले दुर्गम जिल्ला म्याग्दीबाट समेत विश्वमै दुलर्भ मानिएका अप्रेसन,दैनिक अप्रेसन सहितको प्रसुती सेवा उपलब्ध गराइरहेको देखेपछि सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउन उपकरण सहयोग गरेको उनको भनाई उद्धित गर्दै अस्पतालका प्रमुख वरिष्ठ मेडिकल सुपरीटेन्डेन्ट डा. रोशन न्यौपानेल बेनीअनलाइनलाई बताए । ‘अस्पतालको सेवाबाट उत्साहित भएर भविस्यमा समेत सहयोगको प्रतिबद्धता आएको छ ।हामीले सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउन निरन्तर सक्रिय छौ’ डा. न्यौपानेले भने ।
उनका अनुसार मोना हङकङबाट डिजिलट एक्सरे मेसिन, विभिन्न ब्यक्तिबाट सहयोगका साथै प्रवासमा रहेका म्याग्देली आवद्ध मोना लगाएतले गरेको सहयोगले सेवा प्रवाहमा सहज भएको बताए । निक साईमन्स इस्टिच्युटको सहयोगमा अप्रेशनसहितको प्रसुती सेवा जिल्ला अस्पतालमै सञ्चालन भइरहेको अवस्थामा पकेटमा राखेर गर्भवति महिलाको स्वास्थ्य परिक्षण गर्ने मेसिनले सेवालाई थप प्रभापकराी बनाएको अस्पतालका क्लिीनिकल कोअर्डिनेटर डा. धिरेन्द्र मल्लले बताए । ‘अल्ट्रासाउण्डबाट दिइने सबै सेवा उपलब्ध गराउन सकिन्छ ।गर्भवति महिलालाई बेडमै गएर सेवा दिने मेसिन पनि हो’ डा. मल्लले भने ।
उनले भिडियो एक्सरेमा पुग्न नसक्ने विरामीलाई स्वास्थ्यकर्मीले बेडमै पुगेर बच्चाको अवस्था बुझ्न सक्ने बताए । चिकित्सकको अभावमा अल्ट्रासाउण्ड सेवा बन्द हुने भएपनि यो मेसिनबाट स्वास्थ्यकर्मीले गर्भवती महिला र बच्चाको अवस्थाका बारेमा सहज जानकारी लिन सक्ने बताए । गर्भमा रहेको बच्चाको मुटुको चाल समेत मेसिनमा देखाउँछ । गर्भवती भएको ३ महिनापछि मेसिनबाट नियमित चेकजाँच गर्न सकिने उनले बताए ।
अप्रेशनसहितको प्रसुती सेवा जिल्ला अस्पतालमै सञ्चालन गरेपछि हालसम्म १ सय ७४ जनाको सफल अप्रेसन भएको छ । त्यस्तै नियमित प्रसुती सेवामा समेत मेसिनलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ । अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकले समेत विरामीलाई सहज सेवा उपलब्ध गराउने गरी आफ्नो सक्रियतामा समेत उपकरण जुटाउने गरेका छन् । म्याग्दीमा भएका केही अप्रेसनले मेडिकल जर्नलमा समेत चर्चा पाउने गरेको छ ।
Previous articleएनआरएनएको विभिन्न पदमा भिड्दै म्याग्देली
Next articleबेनी–जोमसोम–कोरला सडकको बजेट सकियो